BUKELA 'IXESHA LIKABOB'S BURGERS' ISIQENDU SE-11 -INDAWO YOKUQALA YE-PREMIERE [VIDEO] - IINDABA
Bukela 'Ixesha likaBob's Burgers' Isiqendu se-11 -iNdawo yokuQala ye-Premiere [VIDEO]
NgeCawa Bob's Burgers Inkulumbuso (Fox, 9 / 8c) ibandakanya ukudibana kwakhona iminyaka esixhenxe ukwenziwa- nokuba sele konke kusentloko kaBob.
Kwi-TVLine's sneak peek evela kwesi siqendu, ngokufanelekileyo sibizwa ngokuba yiPhupha uBob omncinci kaBob, umphezulu wosapho lakwaBelcher uthatha uhambo olungazi nto kwigumbi lakhe lesikhuselo, kwindawo adibana kuyo nomlingane wakhe ophelelwe lixesha iRubber Band Squeezy Ball (evakaliswe ngu ILiwa 'S uJack McBrayer).
Ukuhamba kukaBob ezantsi kukhunjulwa kunye nendlela yakhe yokuphelisa uxinzelelo kuqala ngokufanelekileyo ngokwaneleyo. (Ndoda, besidla ngokuba nezihlandlo ezimnandi, huh? Ungafumana ibhendi yerabha rhoqo emva koko, emva koko uyongeze kum!) Kodwa imiba iba mbi kancinci xa umlingiswa kaMcBrayer we-naïve eqala ukuthatha imiba ngokubhekisele kwimpumelelo yokutyela kaBob.
Kwenye indawo kwi-premiere ye-premiere yexesha leshumi elinanye, uTina wenza inzame zokufunda umkhondo wokubetha ngesandla onokwenziwa ngumntu wonke-nangona kunjalo, ekuphenduleni kwisishwankathelo esisemthethweni.
Kwaye nazi iindaba ezilungileyo ezongezelelekileyo zabalandeli beBelchers: I-Fox mva nje ikhuphe ukuvuselelwa kwamaxesha amabini Bob's Burgers kwaye Umfana wosapho , Ukuqinisekisa ukuba imiboniso nganye iya kuqhubeka ngeziqendu zomoya ubuncinci nge-2023.
Hit PLAY kwividiyo engentla ukonwabela ukudibana kwakhona kukaBob ixesha elide kunye nebhola yakhe ayithandayo yebhola yerabha, emva koko yeka ingxelo kunye nemibono yakho phantsi.
Izigaba: Iwiki Iindaba Umqala
Ngaba i-burger king ivuliwe ngomhla wesikhumbuzo
Zingaphi iintombi azifumanayo?
U-laura bailey wobuzalwana obunobumba obupheleleyo
U-lauren graham ushiya i-zoey
darrell umceli mngeni mfazi